နူးညံ့တဲ့အမြှုပ်လေးများနဲ့ ကျန်းမာတဲ့အသားအရေကိုဖန်တီးပေးမယ့် Rise + Shine Gentle Cleanser! | CosmeticMyanmar
Home » Article » နူးညံ့တဲ့အမြှုပ်လေးများနဲ့ ကျန်းမာတဲ့အသားအရေကိုဖန်တီးပေးမယ့် Rise + Shine Gentle Cleanser!
အသားအရေခြောက်သွေ့မွဲခြောက်တဲ့ အသားအရေပိုင်ဆိုင်သူတွေ၊ အသားရောင်မညီညာတဲ့ အသားအရေပိုင်ဆိုင်သူတွေ နဲ့ ကျုံးနိုင်ဆန့်နိုင်အားလျော့နည်းလာတဲ့ အသားအရေပိုင်ဆိုင်သူတွေအတွက် အရမ်းအသုံးတည့်မယ့် မျက်နှာသစ်ဆေး အသစ်ဖြစ်တဲ့ Rise + Shine Purifying Cleanser လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ မျက်နှာသစ်ဆေးလေးရဲ့ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံဟာဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းရုံသာမက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း အသားအရေအတွက် များစွာ အာဟာရဖြစ်စေပါတယ်။ ပန်းသီး နဲ့ မက်မွန်သီး အဆီအနှစ်တို့နဲ့ဖော်စပ်ထားတာကြောင့် အသားအရေကို ကြေးညှော်ချွတ်ခြင်း ( Scrub ) လုပ်ခြင်းမျိုးပြုလုပ်စရာမလိုလောက်အောင် အတွင်းဆုံးပိုင်းအထိ ဖုန်မှုန့်နဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အသားအရေတွင်းရှိ ဆဲလ်တွေကို ပြန်လည်လှုံ့ဆော်နိုင်ပြီး သန့်ရှင်းလန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေမျိုးကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါ။ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အားကို ပြန်လည်နိုးကြားစေပြီး ချွေးပေါက်တွေကိုလည်းကျဉ်းစေပါတယ်။ ဖုန်မှုန့်တွေသာမက လိမ်းခြယ်ထားတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကိုပါ သန့်ရှင်းပေးနိုင်တာကြောင့် ပျိုမေတို့အကြိုက်တွေ့မယ့် Product အမျိုးအစားလေးပါနော်။ သစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း အဆီအကုန်လုံးကိုစုပ်ယူပြီး သွေ့ခြောက်သွားအောင် ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေဓာတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
မျက်နှာကိုရေနဲ့သစ်ပြီး Cleanser အနည်းငယ်ကိုယူလိုက်ပါ။ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ အမြှုပ်များဖြစ်ပေါ်လာအောင် ပြုလုပ်ပြီး မျက်နှာတဝိုက်စက်ဝိုင်းသဏ္ဌန်ညင်သာစွာပွတ်တိုက်ပြီး အသုံးပြုရုံပါပဲ။ အသားအရေတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီအောင် စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ထားတာကြောင့် အသားအရေမရွေး စိတ်ချစွာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အရေအသွေးကောင်းမွန်ပြီး အသားအရေအတွက်များစွာ အထောက်အကူပြုမှတော့ Cleanser ဆိုရင် Rise + Shine Gentle Cleanser ပဲပေါ့။
Image Source: saturdayskin.com